ကြှနျမကို ကြှနျမအဖွဈနဲ့ပဲ မွငျအောငျကွညျ့ပေးပါ – Shinyoon
ကြှနျမကို ကြှနျမအဖွဈနဲ့ပဲ မွငျအောငျကွညျ့ပေးပါ
ကြှနျမကို ကြှနျမအဖွဈနဲ့ပဲ မွငျအောငျကွညျ့ပေးပါ ။
ဘယျသူနဲ့တူလိုကျတာ ဆိုတဲ့စကားမြိုးတှကေို ကြှနျမ ဘယျတုနျးကမှ မနှဈသကျခဲ့ဖူးဘူး ။ ကြှနျမက ကြှနျမနဲ့ပဲ တူခငျြပါတယျ ။ ဒါတှကွေောငျ့ ကြှနျမကို တခွားတဈယောကျရဲ့ဘဝတှနေဲ့ ခိုငျးနှိုငျးပွီးတော့ မပွောပါနဲ့ မဆိုပါနဲ့ ။ ကြှနျမကို ဘယျသူနဲ့မနှိုငျးပဲ ကြှနျမရဲ့ ဖွဈတညျမှုလေးကို တဈကွိမျတဈခါပဲ ဖွဈဖွဈ မေးကွညျ့ပေးပါ ။
ကိုယျ့ထကျ အမွငျ့ကိုရောကျနလေို့လဲ မနာလိုခွငျး အလငျြးမရှိဘူး . . . သူ့ဘဝလေးမွငျ့နပေါလားဆိုတဲ့စိတျနဲ့ မုဒိတာလေးပှားတယျ ။ ကိုယျ့ထပျ နိမျ့ကနြလေို့လဲ အနိုငျယူလိုခွငျး မရှိဘူး ။ သူ့ဘ၀က ကိုယျ့ထကျ နိမျ့ကနြပေါလားဆိုတဲ့စိတျနဲ့ စာနာသနားတယျ ကူညီနိုငျတဲ့အရာဆို ကူညီပေးလိုကျတယျ ။ ဖိနငျးလိုစိတျ အလငျြး မရှိပါဘူး ။
ကိုယျ့ဘ၀နဲ့ကိုယျ ပြျောတတျအောငျနပေါတယျ ။ လူခငျြးပဲ တူကွတာလေ စိတျဓာတျခငျြး ရညျမှနျးခကျြခငျြး အိပျမကျတှခေငျြး မတူညီကွဘူး ။ ဒီ့အတှကျ ကြှနျမကို သူ့လိုဖွဈရမယျဆိုပွီး တဈယူသနျကွီး မဆုံးဖွတျပါနဲ့ သူက သူလေ ။ ရညျမှနျးခကျြခငျြးမတူတဲ့လူနှဈယောကျက ခရီးလမျးအကှာအဝေးလဲ မတူညီတတျကွဘူးလေ ။ ဒါကွောငျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ပနျးတိုငျရောကျတာခငျြးလဲ မတူညီတတျကွဘူး ။
သူကတော့ ဒီလိုဖွဈနပွေီ နငျကကော ဘာလုပျနသေေးတာလဲ သူ့လိုကျလုပျပါလားဆိုတဲ့စကားတှကေ အားပေးစကားမဟုတျတော့ဘူး ကိုယျ့ကို မယုံကွညျရာ နားမလညျရာရောကျတဲ့ စကားတှပေါ ။ သူလဲ သူ့လမျးသူလြှောကျနတောပဲ ကိုယျလဲ ကိုယျလြှောကျနတောပါ ။ ဒီလို မတူညီတဲ့လမျးတှပေျေါက လူနှဈယောကျကို ယှဉျပွီး မွငျလိုကျတာတော့ တျောတျောကို ဆိုးတယျ ။
ဥပမာ – အဆိုတျောဖွဈခငျြတဲ့ကောငျမလေးက မိုကျကိုငျပွီးဆော့တယျ ။ ဆရာဝနျဖွဈခငျြတဲ့ကောငျမလေးက ဆေးထိုးအိပျကိုငျပွီး ဆော့တယျ ကလေးခငျြးပဲတူတာပါ အတှေးခငျြးကမြတူကွတော့ဘူး ။ အဲ့လိုပဲ မိုကျကိုငျနတေဲ့ ကလေးမလေး လကျထဲကို ဆေးထိုးအပျထညျ့ပေးလိုကျ အဲ့ကလေးမလေး ဘယျလိုလုပျပြျောပါတော့မလဲ ။
ကြှနျမတို့တှကေ . . .လူခငျြးပဲ တူကွတာပါ ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျရှငျသနျခငျြကွပုံခငျြး မတူကွဘူး ။ ကိုယျ့လမျးနဲ့ ကိုယျလြှောကျပါတယျ ။ ကူညီဖေးမပေးခငျြပါတယျဆိုရငျ ကြှနျမကို ကြှနျမအဖွဈနဲ့ပဲ မွငျကွညျ့ပေးပါ ။
ကျွန်မကို ကျွန်မအဖြစ်နဲ့ပဲ မြင်အောင်ကြည့်ပေးပါ ။
ဘယ်သူနဲ့တူလိုက်တာ ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကို ကျွန်မ ဘယ်တုန်းကမှ မနှစ်သက်ခဲ့ဖူးဘူး ။ ကျွန်မက ကျွန်မနဲ့ပဲ တူချင်ပါတယ် ။ ဒါတွေကြောင့် ကျွန်မကို တခြားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့ မပြောပါနဲ့ မဆိုပါနဲ့ ။ ကျွန်မကို ဘယ်သူနဲ့မနှိုင်းပဲ ကျွန်မရဲ့ ဖြစ်တည်မှုလေးကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် မေးကြည့်ပေးပါ ။
ကိုယ့်ထက် အမြင့်ကိုရောက်နေလို့လဲ မနာလိုခြင်း အလျင်းမရှိဘူး . . . သူ့ဘဝလေးမြင့်နေပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မုဒိတာလေးပွားတယ် ။ ကိုယ့်ထပ် နိမ့်ကျနေလို့လဲ အနိုင်ယူလိုခြင်း မရှိဘူး ။ သူ့ဘ၀က ကိုယ့်ထက် နိမ့်ကျနေပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ စာနာသနားတယ် ကူညီနိုင်တဲ့အရာဆို ကူညီပေးလိုက်တယ် ။ ဖိနင်းလိုစိတ် အလျင်း မရှိပါဘူး ။
ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် ပျော်တတ်အောင်နေပါတယ် ။ လူချင်းပဲ တူကြတာလေ စိတ်ဓာတ်ချင်း ရည်မှန်းချက်ချင်း အိပ်မက်တွေချင်း မတူညီကြဘူး ။ ဒီ့အတွက် ကျွန်မကို သူ့လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး တစ်ယူသန်ကြီး မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ သူက သူလေ ။ ရည်မှန်းချက်ချင်းမတူတဲ့လူနှစ်ယောက်က ခရီးလမ်းအကွာအဝေးလဲ မတူညီတတ်ကြဘူးလေ ။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပန်းတိုင်ရောက်တာချင်းလဲ မတူညီတတ်ကြဘူး ။
သူကတော့ ဒီလိုဖြစ်နေပြီ နင်ကကော ဘာလုပ်နေသေးတာလဲ သူ့လိုက်လုပ်ပါလားဆိုတဲ့စကားတွေက အားပေးစကားမဟုတ်တော့ဘူး ကိုယ့်ကို မယုံကြည်ရာ နားမလည်ရာရောက်တဲ့ စကားတွေပါ ။ သူလဲ သူ့လမ်းသူလျှောက်နေတာပဲ ကိုယ်လဲ ကိုယ်လျှောက်နေတာပါ ။ ဒီလို မတူညီတဲ့လမ်းတွေပေါ်က လူနှစ်ယောက်ကို ယှဉ်ပြီး မြင်လိုက်တာတော့ တော်တော်ကို ဆိုးတယ် ။
ဥပမာ – အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်မလေးက မိုက်ကိုင်ပြီးဆော့တယ် ။ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်မလေးက ဆေးထိုးအိပ်ကိုင်ပြီး ဆော့တယ် ကလေးချင်းပဲတူတာပါ အတွေးချင်းကျမတူကြတော့ဘူး ။ အဲ့လိုပဲ မိုက်ကိုင်နေတဲ့ ကလေးမလေး လက်ထဲကို ဆေးထိုးအပ်ထည့်ပေးလိုက် အဲ့ကလေးမလေး ဘယ်လိုလုပ်ပျော်ပါတော့မလဲ ။
ကျွန်မတို့တွေက . . .လူချင်းပဲ တူကြတာပါ ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရှင်သန်ချင်ကြပုံချင်း မတူကြဘူး ။ ကိုယ့်လမ်းနဲ့ ကိုယ်လျှောက်ပါတယ် ။ ကူညီဖေးမပေးချင်ပါတယ်ဆိုရင် ကျွန်မကို ကျွန်မအဖြစ်နဲ့ပဲ မြင်ကြည့်ပေးပါ ။
သူမြားအကွောငျး ပွောဖို့လဲ အခြိနျတှေ မအားဘူး